किन एकाएक अमेरिकन आर्मी नेपाल आए ?
नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवसायीकरणका विषयमा अमेरिकी सेनाले सहकार्य गर्ने भएको छ। सहकार्यका लागि छलफल गर्न अमेरिकी सेनाको &lsquo;युएस आर्मी प्यासिफिक&rsquo; अन्तर्गतका २० सैनिक अधिकारी काठमाडौं आएका छन्। नेपाली सेनालाई प�
इरानले भेटायो अर्काे ठूलो तेल भन्डार
इरानमा एक अर्काे विशाल तेल भन्डार भेटिएको छ। इरानका इन्जिनियरहरुले उक्त तेल भन्डार पत्ता लगाएको इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले घोषणा गरेका छन्। यहाँ करिब ५३ अर्ब ब्यारेल तेल भएको अनुमान गरिएको छ। चौतर्फी आर्थिक प्रतिबन्
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा छलफल गर्न संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको छ । सांसदहरूले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे प्
मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न चीनविरुद्ध पनि प्रदर्शन
काठमाडौँ । चिन र भारतले नेपालका विभिन्न जिल्लामा भूभाग मिचेको भन्दै मौलिक जरोकिलो पार्टीले कोणसभामार्फत विरोध प्रदर्शन गरेको छ । पार्टीले आज काठमाडौँको गोंगबुमा कोणसभा गरी मिचिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको ह
विगत १० महिनाको अवधिमा करिब १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०१९ को अक्टोबरसम्म नौ लाख ७५ हजार ५५७ जनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा आठ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल घुमघामका �
जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालन अझै अलमलमा
काठमाडौं । जयनगर&ndash;जनकपुर रेल पुन सञ्चालनमा ल्याउन अझै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ । गत वर्षको पुसबाट नै रेल चलाउने घोषणा गरेको सरकारले आगामी पुससम्ममा पनि चलाउने ठेगान छैन ।सरकारले रेल सञ्चालनका लागि सरकारी स्वामित�
काश्मीरमा पाँच मजदूरको गोली हानी हत्या
१३ कार्तिक । भारतद्वारा प्रशासित कश्मीरमा चरमपन्थी सूहले ५ जनाको हत्या गरेको छ । कुलगाम जिल्लाको कातरसू गाउँमा चरमपन्थीले ५ जनाको हत्या गरेको कश्मीर प्रहरीले पुष्टि गरेको हो । जम्मू&ndash;कश्मीर प्रहरीले ट्वीट मार्फत हत्या भएको
दक्षिणी फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्प
एजेन्सी, कात्तिक १२ गते। दक्षिणी फिलिपिन्समा गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी कम्तिमा १ जनाको मृत्यु भएको छ ।एक हप्ता अघि मात्र सोही क्षेत्रमा भूकम्पमा जाँदा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।भूकम्पको केन्द्रविन्दु कोटाबाटो प्�
प्रकाशित मितिः कार्तिक 12, 2076
निजगढ, कात्तिक १० गते। दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बढीमा १ एक २० बीस हजार मात्र रुख काटे पुग्ने भएको छ । विमानस्थल निर्माणस्थलमा काटिने रुखको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय बाहिरिएका हल्लाले विमानस्थललाई अन्तर�
नेपालमा तिहार यमपञ्चक रूपमा मनाइन्छ  । पाँच दिनसम्म मनाइने यो नेपालीका लागि दसैंपछिको दोस्रो ठूलो चाड हो  । तिहारका समयमा गरिने झिलिमिलीका कारण हुन सक्छ, हिजोआज यो चाडलाई दीपावलीसमेत भन्ने गरिन्छ । यता भारतमा भने धार्मिक हिस
सिरियाली कुर्दिसलाई टर्कीको सीमा क्षेत्रबाट पर राख्ने सहमित
लण्डन, ६ कात्तिक । टर्की र रुसबिच सिरियाली कुर्दिसलाई टर्कीको सीमा क्षेत्रबाट पर राख्ने सम्बन्धमा सहमित भएको छ। टर्की र रुसले यो सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सिरियाको उत्तरी क्षेत्र टर्कीसँग जोडिएको छ र सो क्षेत्रमा कुर्दिस�
प्रकाशित मितिः कार्तिक 7, 2076
चोटले सतायो नेइमारलाई, फिजियो रुममै अड्किए
विश्व फुटबलमा पछिल्लो पटक चोटले सर्बाधिक सताईएका खेलाडी हुन्, नेइमार । त्यसैले त यी ब्राजिलियन सुपरस्टार पछिल्लो समय मैदानमा भन्दा फिजियो र चिकित्सकको रुपमा बढी घुलमिल हुन थालेका छन् । पटक पटक चोट बोक्दै आएका नेइमारलाई अहि�
मोदीसँग शाहरुख र आमिरको सेल्फी
धरान, कात्तिक ०५ गते। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय फिल्म उद्योगका अभिनेताहरुसँग भेटघाट गरेका छन् ।प्रम मोदीले शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनावतजस्ता कलाकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् । त्यसक्रममा गान्धीको
भारतका दुई राज्यमा मतदान : मोदी र सोनियाको परीक्षा
भारतका दुई राज्यमा विधानसभा निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ। महाराष्ट्र राज्य र हरियाणा राज्यमा विधानसभाका लागि सोमबार बिहानैदेखि मतदान भइरहेको हो। महाराष्ट्रमा २८८ विधानसभा सिटका लागि मतदान भइरहेको छ भने हरियाणामा ९० विध�
प्रकाशित मितिः कार्तिक 4, 2076
कश्मीरमा गोलाबारी : दुई भारतीय सैनिकको मृत्यु
एजेन्सी, कात्तिक ०३ गते। जम्मू&ndash;कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ ।तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबारीमा आफ्ना दुई सैनिकले ज्यान गुमाएको भारतले जानकारी दिएक
तोकिएको मितिमा धरहरा नबन्ने, म्याद थप्ने लविङमा ठेकेदार
काठमाडौं, कात्तिक २ गते। गोरखा भूकम्पका क्रममा ढलेको धरहरा तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसक्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनी समयावधि थप्नले लविङमा जुटेको छ। धरहराको बाँकी संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा समयमा उपलब्ध हुन नसकेको भन�
कर्णाली करिडोर कि द्रुतमार्ग ?
सुर्खेत, असोज २९ गते। यही साता भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सा&ndash;सुर्खेत द्रुतमार्गलाई द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा पार्न निकै मिहिनेत गर्&zwj;यो । संघीय सरकारले नेपालका तर्फबाट छल�
जापानमा आँधीका कारण ६४ जनाको मृत्यु
जापानमा आएको &lsquo;हागिबिस&rsquo; नामक शक्तिशाली आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६४ पुगेको छ । जापानको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था एनएचकेले मङ्गलबार दिएको जानकारीअनुसार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६४ पुगेको र अझै बढ्न सक्ने आशङ्का गरिएक�